Soo iibso 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
4.50 ka mid ah 5	ku saleysan 2 ratings macaamiisha
SKU: 28292-43-5. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee 2-Aminoisoheptane (28292-43-5), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
2-Aminoisoheptane, oo sidoo kale loo yaqaano DMHA ama Octodrine, ayaa noqotey qayb caan ah oo ka mid ah maaddooyinka horay loo sii wado iyo gubida dufanka tan iyo bilowgii 2017. Waa kiciyaha oo la rumeeysan yahay in lagu hagaajiyo heerarka tamartaada. 2-Aminoisoheptane waa qaab-dhismeed aad u la mid ah DMAA. Waxaa si dabiici ah looga heley gudaha gudaha caleenta Walnut Tree (AKA Juglans Regia).
2-aminoisoheptane Calaamadaha asaasiga ah
Formula kelli: C7H17N
Miisaankani waa: 115.22
Magacyada kiimikada: 2-aminoisoheptane
Magacyada Shirkadaha: DMHA, Octodrine
2-Aminoisoheptane, sida kiciyaha cusub ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa ka hor inta aan lagu darin jimicsiga horay u sii deynaya baruurta. Tani waa wax kasta oo ay sabab u tahay soo jeedinta labadaba ee korantada tamarta iyo xakamaynta cuntada.
2-aminoisoheptane (Octodrine) ayaa si dhakhso ah u heleysa caan u ah awoodeeda iyo xoojinta kobcinta niyadda. Tani waxay si gaar ah u caan baxday sida kaalmo-dhaqaaleed tan oo ay leedahay sifooyin badan oo hubiya in aad ka heshay inta ugu badan ee tababarkaaga: heerarka tamarta kor u qaadaya (taasoo fududeyneysa inaad naftaada riixdo oo aad u dhaqaaqdo wax badan, taas oo macnaheedu yahay kalooro badan oo gubtay!) (tamar badan oo macnaheedu ma aha haddii aanad lahayn rabitaan ah inaad ka shaqaysid), iyo niyad kobcinta (markaad dareentid fiicnaan inta lagu jiro iyo ka dib shaqadaaada - waxay u badan tahay inaad u soo laabato oo aad sameyso mar kale). Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah 5,6, xanuun yar oo la dareemo 5,6, iyo hagaajinta bronzodilation 3b, 4b, 5b - kaas oo soo galaya marka la qaado miisaannada, kor u qaadida hannaanka ama fasalka HIIT, ama xitaa iskuulada carruurta iyo guri buuxa shaqooyinka.
Mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee ku saabsan 2-aminoisoheptane (Octodrine) waa in faa'idooyinkani ay si dhakhso ah ugu dhuftaan qaab dhismeedka molecular. Isku daridda koox methyl ah oo ku taala alfa carbon waxay kordhisaa nooca amphipilicic ee dhismaha - taas oo ka dhigaysa labadaba biyo iyo lipid-ereyga. Dhiirrigelinta dheellitirka lipid waxay si weyn u kordhinaysaa awoodda ay u leedahay in ay ka gudubto xuddunta dhiiga maskaxda ah halkaas oo ay awood u leedahay in ay kor u qaaddo fayo-gelinta xoojinta iyo saameynta jeermiska. 8,9
Macaashka Lacagta Miisaanka
2-aminoisoheptane (Octodrine) ayaa sidoo kale gacan ka geysan kara in uu kobciyo miisaanka lumis la'aanta sababtoo ah awooddeeda inay hoos u dhigto rabitaanka cuntada iyo sidoo kale wanaajinta niyaddaada adoo kordhinaya hormoonnada mas'uulka ka ah inaad sameysid "inaad dareento fiicnaan" 4b, 5b (waxaad ku farxi kartaa inaad fadhiisato kulaylka dareen hoos!).
2-aminoisoheptane (Octodrine) 's waxqabadka dhiirrigelinta niyadjabku wuxuu ka yimaadaa awoodiisa si loo kordhiyo dopamine iyo norepinephrine, kuwaas oo ka masuulka ah dabacsanaanta iyo wacyigelinta. 3b, 4b, 5b, 6b. Xogta iyo qaabka la midka ah ee la xidhiidha monoamine neurotransmitters, 2-aminoisoheptane (Octodrine) waxay kicin kartaa raadinta amine ee la xidhiidha daaweeye 1, iyada oo si ku meel gaar ah looga hortago dib-u-gurashada dopamine iyo norepinephrine ee dareeraha daawada leh - hagaajinta "punch" iyo awoodda joogtada ah.
Intaas waxaa sii dheer, dadka isticmaala DMHA waxay soo sheegaan xadka xanuunka iyo daalku yareeyay, sidaas darteed u oggolow dadka isticmaala in ay helaan faa'iidada ugu badan ee hawshooda. 2-aminoisoheptane (Octodrine) ayaa sidoo kale ku dhiirrigelisay dhiira galin wax ku ool ah. Sida horay loo sheegay, DMHA waxay kicisaa sii dopamine. Heerarka Dopamine waxay saameyn ku yeeshaan heerarka dhiirigelinta iyo isdaba marinta. Dhiirigelintu waa rabitaanka ah in wax laga qabto markaad isbaddal tahay. Qofku wuxuu rabi karaa inuu wax ku guuleysto, laakiin haddii ay la kulmaan caqabado jidka maraya, markaa way iska daayaan. Si kastaba ha noqotee, haddii qofku leeyahay kalgacayl, markaa way ka dhumi doonaan sababaha illaa ay ka gaaraan waxa ay u soo baxeen. Nasiib wanaag, dopamine, oo sii deyntiisa ay keentay qaadashada DMHA, waxay hubisaa inaad leedahay labadaba dhiirigelinta iyo ujeeddada lagu gaarayo hadafyadaada.
Isku-darka saameynta ee khibrad leh marka la isticmaalayo DMHA waxay bixisaa ta ugu dambeyntii taageerada tababarka, taas awgeed waa kordhinta ka-qaybgalka waxqabadyo kala duwan oo ku saleysan jimicsiga, cabitaannada hore iyo cabitaanka.
Waa maxay qiyaasta 2-aminoisoheptane
Wali ma jirto talo bixinta rasmiga rasmiga ah ee loo heli karo arrintan. Sidoo kale way adagtahay in la sheego intee le'eg ee shirkadan kiciya ee isticmaalaya maaddaama ay mar hore isku dhafan yihiin alaabta. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa qaddi amaan ah oo wax lagu dhejiyo 100 ilaa 300mg.
Had iyo jeer xasuuso in 2-aminoisoheptane la isticmaali karo kahor inta aan la qaban tababarka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa maalintii oo dhan. Maadaama ay tahay kiciye, isku day inaad iska ilaaliso isticmaalka ka hor wakhtiga jiifka sababta oo ah waxay jahawareerin kartaa qiyaasta caadiga ah ee hurdadaada.
Si aad uga faa'iidaysato waxqabadka kor u kaca ee 2-aminoisoheptane (DMHA), waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo qiyaastii daqiiqado 15-30 ka hor inta aan la shaqayn. Beddel ahaan, haddii loo isticmaalo inta badan xajmintiisa cuntada, 2-aminoisoheptane (DMHA) ayaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro maalintii inta u dhexeysa cuntooyinka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talineynaa in aad taxaddar sameyso haddii aad isticmaasho qaybahan danbe goor galinka dambe ama fiidkii hore, maxaa yeelay waxay leedahay awood u yeelashada inaad awooddo inaad seexato.
Sidee 2-aminoisoheptane u shaqeeyaa
2-Aminoisoheptane (DMHA) waxay si siman u shaqeysaa DMAA caanka ah. Laga soo bilaabo qaab dhismeedka, 2-Aminoisoheptane (DMHA) 's xiriirka dhismaha waxaa loo yaqaannaa walxaha sii daaya monoamine. Kuwani waa xeryaha oo leh awood u leh heerarka sii kordhaya ee monoamines qaarkood. Kuwani waa dopamine iyo noradrenaline. Waxay ka shaqeysaa kor u qaadista dopamine iyo noradrenaline iyada oo isla markaa si tartiib ah hoos loogu dhigo dib-u-qaadista iyada oo loo marayo dhaq-dhaqaaqa amine ee la xidhiidha daawada amine. Tani waxay joojinaysaa awoodda ay u leeyihiin inay soo celiyaan xayawaankooda iyagoo ilaalinaya monoamines muddo dheer. Taasi waa sababta aad u yeelatay saameyn soconaya oo soconaya. Xogta kale ee loo arko inta u dhaxaysa DMAA iyo 2-Aminoisoheptane (DMHA) ayaa lagu daraa koox methyl ah oo ku jirta xayawaanka Alfa kaas oo xaddidaya saamaynta maaddada monoamine oxidase (MAO), waxay kordhisaa nooca amphiphilic ee qaybtan, iyo sidoo kale midabtakoorka catecholamine gaadiidka. Waa maxay tani micnaheedu waa noloshii nuska ah ee dhismuhu wuu sii dheeraanayaa, waxay ka gudbi doontaa barashada dhiigga maskaxda oo aad u sahlan, waxayna yeelan doontaa saameyn ballaaran oo dhiirigelin leh guud ahaan.
Kiciyeyaasha cusub ee soo baxa waxay ku soo baxaan naqshadda jirka ee 2016! Waa 2-aminoisoheptane, oo ah qaabkii ugu danbeeyay ee DMAA si kor loogu qaado tamarta iyo xajinta cuntada. Kicinta diyaargarawga sanadka cusub ee cusub ayaa noqda diiradda kumanaan qof oo jidh-dhaqameed iyo cayaartoy.
Waa kuwan waxyeelada soo socota ee 2-aminoisoheptane:
Dypsnea (Gaabnaanta Neefsashada)
Wadna garaaca wadnaha
2-aminoisoheptane Root Powder
Miyuu 2-aminoisoheptane ku dhaco Dhibaatooyin kasta
Maaddaama 2-aminoisoheptane uu ku cusub yahay suuqa nafaqada, wax saameyn ah looma soo sheegin. Waxaa laga yaabaa in aan u barbardhigo DMAA. Waxyeellooyinka aan la rabin waxay ku dhici karaan qiyaasta sare ee 2-aminoisoheptane, tusaale ahaan, wadne garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga oo sareeya iyo neefta oo adkaata. Sida kiciya kasta, waxaa ugu fiican in la bilaabo qadar yar si aad u hesho helitaanka dulqaadashada iyo xasaasiga ah ee qaybta.
Sida loo iibsado 2-aminoisoheptane laga bilaabo AASraw
2-aminoisoheptane Roodhafka Roodhiga Khatarta ah
Dymethazine (DMZ) budada
Budada loo yaqaan 'Ethisterone Powder' (434-03-7)